wake up Madagascar Hitondra ny tabataban�ny olom-pirenena eny amin�ny kianja Maki
Hitondra ny toreo sy ny talahon�ny vahoaka Malagasy amin�ny alalan�ilay hetsika tabataban�ny olom-pirenena eny amin�ny kianja Maki Andohatapenaka anio ny Wake up Madagascar, fikambanana iray izy miezaka mijery ifotony ireo maharary ny vahoaka Malagasy .
Raha araka ny fanazavan’izy ireo omaly mantsy dia diso lalim-paka loatra ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy ankehitriny nefa toa tsy miraharaha izany akory ny mpitondra sady minia manampin-tsofina. Tsy vitsy ireo efa matin’ny hanoanana, betsaka ny tsy an’asa nefa ny fandraisana ireo vahiny ihany no mahamaika ny mpitondra, kajikajy izay tsy nisy fiantraikany mivantana tamin’ny fiainan’ny vahoaka hatreto, indrindra fa ny madinika. Nosafidian’izy ireo manokana ny andro anio sabotsy 25 novambra, mba hanehoana amin’ireo vahiny ny tena zava-misy marina eto Madagasikara fa tsy afinafenina lava izao. Na izany aza anefa hetsika am-pilaminana no hatao amin’ny alalan’ny fitsofana kiririoka, fanapoahana lapoaly …mba ho hitan’ny rehetra fa reraka sy noana ny vahoaka Malagasy. Anio amin’ny 11 ora no fotoana manoloana ny kianja Maki Andohatapenaka, hiantsoana ny olom-pirenena rehetra. Marihina moa fa hifanindran-dalana amin’ity hetsika ity ihany koa ny hetsiky ny mpanao gazety saingy eny amin’ny sampanana Ambohitrimanjaka indray no toerana nosafidian’ireto farany.
Legende : Azo atao koa ny mitondra lovia tahaka izao hapoaka miaraka amin’ny sotro